Tue, Mar 20, 2018 | 08:08:09 NST
भाग्य जाँच्ने कि भविष्य बनाउने ?
भुमीराज पराजुली/उज्यालो । क्वालालम्पुर, चैत २५ - वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका झापाका राजेश केसी (नाम परिवर्तन) ले टोटो, म्यागनम् र दामासायी नाम गरेको चिठ्ठा किनेर एक वर्षको कमाई सकाउनुभयो । चिठ्ठा मार्फत लाखौं रकम हात पार्ने आशामा दैनिक रुपमा नै चिठ्ठा काट्नले गरेका उहाँले चिठ्ठामा एक पैसो पनि हात पार्नु भएन । उल्टो आफूले पसिना बगाएर कमाएको पैसा गुमाउनुभयो ।
यस्तो छ पण्डित तथा पुरोहितको आचारसंहिता
काठमाडौं, चैत २४ – काठमाडौंमा भएको प्रथम राष्ट्रिय पण्डित सम्मलेनले पण्डित तथा पुरोहितहरुको लागि आचारसंहिता तयार पारेको छ । देशभरबाट झण्डै ५ सयजना पण्डित, पुरोहित तथा ज्योतिषी सहभागी सम्मेलनले ७ वटा कार्यपत्र पनि पारित गरेको छ । आचारसंहितामा पण्डितहरुको टुप्पी, जनै तथा निधारमा अनिवार्य टीका चन्दन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अकुपाई बालुवाटार सत्याग्रहका अभियानकर्ता पक्राउ
काठमाडौं, चैत २५ – अकुपाई बालुवाटार सत्याग्रहका अभियानकर्ता ईशान थापालार्ई प्रहरीले पक्रेको छ । नियमीत धर्नामा बसेका बेला उहाँलाई पक्राउ गरि प्रहरी प्रभाग कमलपोखरीमा राखिएको छ ।
आगलागीबाट तनहुँमा ४ घर जले
तनहुँ, चैत २५ – शनिवार तनहुँको चोक चिसापानी र भाँनु गाविसमा आगलागीबाट ४ घर जलेर ध्वस्त भएका छन् । विद्युत सर्ट भई चोकचिसापानीका भरत सापकोटाको घरबाट सुरु भएको आगलागीले सापकोटा र उनका छिमेकीको घर जलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा विभिन्न पदमा आवेदन आह्वान
काठमाडौं, चैत २५ – त्रिभूवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले त्रिवि अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसमा पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा खुल्ला तर्फ २३, महिला १० र आदिवासी जनजाति १ गरी कूल ३४ उपप्राध्यापक पदमा दरखास्त मागिएको छ ।
चिडियाखाना घुम्नेको संख्या दोब्बर
ललितपुर, चैत २५ – सदर चिडियाखाना अवलोकन गर्नेको संख्या झण्डै दोब्बरले बढेको छ । विद्यालयमा परीक्षा सकिएको र नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु भैनसकेकाले फुर्सदिला विद्यार्थीहरुको कारण चिडियाखाना अवलोकन गर्नेको संख्या बढेको हो ।
सकियो प्रथम राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलन
काठमाडौं, चैत २४ – २७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र जारी गर्दै प्रथम राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलन सकिएको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले पर्यावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपणमा दिनुका साथै धर्मको नाममा श्रीमद् भागवत पुराणमा भइरहेको व्यापारिकरण निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
पत्रकारिता निष्पक्ष हुन नसकेको प्रेस काउन्सिल अध्यक्षको भनाई
भक्तपुर, चैत २४ – प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीले पत्रकारिता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र पत्रिकारिता आवश्यक रहेपनि पछिल्लो समय पित पत्रकारिता हावी हुँदै गएको अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।
तीन जना रेडियोकर्मी सम्मानित
खोटाङ, चैत २४ - रेडियोको माध्यमबाट चामलिङ भाषा तथा संस्कार संस्कृतिको बिकासमा योगदान दिएको भन्दै खोटाङका तीन जना रेडियोकर्मी सम्मानित भएका छन् । किरात राई खाम्बातिम सुनसरीले रुपाकोट रेडियोका कार्यक्रम प्रस्तोता तथा कार्यक्रम सञ्चालक रकम रोदुङ, ज्ञानु सेरालुङ र दिपेश चामलिङलाई सम्मान गरेको हो ।
गाविसका पूर्व पदाधिकारीको नाममा लाखौँ बेरुजु
ललितपुर, चैत २४ – ललितपुरको देवीचौर गाउँ विकास समितिका पूर्व पदाधिकारीको नाममा लाखौंको पेश्की रकम बेरुजु भेटिएको छ । २०४९ सालदेखि लगातार दुई कार्यकाल गाउँ विकास समितिको नेतृत्व सम्हालेका देवीचौरका निवर्तमान गाविस अध्यक्ष नरबहादुर तामाङ र उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद दुलालको नाममा लाखौंको पेश्की बेरुजु भेटिएको हो ।
डोटीमा एकजनाले मात्र हतियार बुझाए
डोटी, चैत २४ - बिना ईजाजतका हतियार बुझाउन प्रहरी प्रशासनले पटक पटक आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म एकजनाले मात्र हतियार बुझाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार चमरा चौतारा ७ का दीर्घसिंह चम्सालले मात्र एकनाले भरmवा बन्दुक बुझाउनु भएको छ ।
अकुपाई वालुवाटारको सय दिन पूरा
काठमाडौ, चैत २४ – महिला हिंसा र दण्डहीनता अन्त्य विरुद्ध दबाबमूलक अभियान अकुपाई बालुवाटार शनिबार एक सय दिन पूरा भएको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै एक सय दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि धर्नामा बस्दा पनि आफूहरुले उठाएका मुद्दामा सरकारले चासो नदिएको अभियानकर्ताको गुनासो छ ।
भारतमा चरेस सहित दुई नेपाली समातिए
नेपालगन्ज, चैत २४ ठूलो परिमाणको लागुऔषध चरेससहित दुईजना नेपाली भारतमा पक्राउ परेका छन् । बहराईच जिल्लाको रुपैडियामा रहेको एसएसबीको सातौं बटालियन पोष्टले २४ किलो ३ सय ३६ ग्राम चरेससहित रुकुम कार्की ८ का ३३ बर्षीय जोगबहादुर पुन र रुकुम पोखरा ८ का २८ बर्षीय दिनेश थापालाई पक्राउ गरेको हो ।
हावाहुरी र चट्याङ पर्ने मौसम
काठमाडौ, चैत २४ – मनसुन पूर्वको समय भएकाले बेलुकीपख हावाहुरी सहित मौसम बदली हुने क्रम बढेको छ । यो क्रम अझै डेढ/दुई महिनासम्म रहने बरिष्ठ मौसमविद राजेन्द्र श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
कैदीले जेलभित्रै आत्महत्या गरे
बझाङ, चैत्र २४ – बझाङ कारागारभित्र एक जना कैदीले आत्महत्या गरेका छन् । कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सजायँ भोगिरहेका सुवेडा गाविस १ का हरिप्रसाद जैसीले शौचालयमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरी प्रमुख उदय तामाङले जानकारी दिनुभयो । २६ वर्षीय जैशीले शुक्रवार राति एक बजे आत्महत्या गरेका हुन् । राती सबै सुतेको बेला सौचालयको ढोका थुनी आत्महत्या गरेका जिल्ला कारागार बझाङका जेलर मिन लामिछानेले बताउनुभयो ।...
हेटौडामा विद्यालयको ४ वटा गाडीमा आगजनी
हेटौंडा, चैत २४ – मकवानपुरको हेटौंडा नगरपालिका नवलपुरको हेटौडा एकेडेमी आवासीय माविको विद्यार्थी बोक्ने चारवटा बसमा शुक्रबार राति आगजनी भएको छ । विद्यालय कम्पाउन्डमा रहेको ४ वटा बसमा राति साँढे ११ बजे आगजनी भएको हो । स्थानीय वासिन्दा र विद्यालयका कर्मचारीले आगो निभाएका थिए ।
नवलपरासीमा वस दुर्घटना, २ को ज्यान गयो, २० घाइते
नवलपरासी, चैत २४ – नवलपरासीको दाउन्नेमा शनिबार विहान बस पल्टिंदा दुई जनाको ज्यान गएको छ, २० जना घाइते भएका छन् । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जादै गरेको ना ३ ख ३६७८ नंबरको बस विहान दुई बजे दाउन्ने आरालोमा पल्टिदा रौतहट कुडिया गाविस ६ का १८ वर्षीय रुपन बैठा र सर्लाही सल्यानपूर १ की एक वर्षीया मनिषा यादवको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको हो ।
विद्यालयबाट पुस्तकमा यसरी ठगिन्छन् अभिभावक
काठमाडौ, चैत २४ – विद्यालय हाताबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था लागू भएपनि अभिभावक मारमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासंगै अनिवार्य रुपमा अभिभावकलाई किताबको सूची दिनुपर्ने र अभिभावकले आफूले चाहेको ठाउँबाट पुस्तक खरिद गर्न पाउने व्यवस्था शिक्षा विभागले गरेको छ ।
आचारसंहिता नमान्ने पण्डितलाई सामाजिक बहिस्कार !
काठमाडौ, चैत २४ – पुरोहित तथा पण्डितहरुको लागि आचारसंहिता निर्माण गर्दै प्रथम राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलन शनिबार सकिँदैछ । शुक्रबार पेश भएका बिभिन्न ५ वटा कार्यपत्रमाथि समीक्षा गरेर आचारसंहिता बनाइने आयोजक राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालका प्रवक्ता डा. वासुदेवकृष्ण शास्त्रीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
बारामा भीषण आगलागी, ३८ घरगोठ जले
बारा, चैत २३ – बाराको इनर्वामालमा भीषण आगलागी भएको छ । इनर्वामाल २ मा शुक्रबार दिउसो भएको आगलागीबाट ३८ वटा घर गोठ जलेर नष्ट भएको बाराका प्रहरी उपरिक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनु भयो ।
अवैध लागू औषध सहित एकजना पक्राउ
नवराज ढुंगाना/ उज्यालो । पोखरा, चैत २३ – विभिन्न खालका अवैध लागू औषध सहित पोखराबाट एक युवक पक्राउ परेका छन् । लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो पोखरा शाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तनहुँको व्यास नगरपालिका घर भई पोखराको नयाँबजार बस्ने २१ बर्षीय कृष्ण गुरुङलाई पक्रेको हो ।
मजदुरी गरेर घर फर्कदै गरेका नेपाली भारतबाटै बेपत्ता
सल्यान, चैत २३ – भारतमा मजदुरी गरी घर फर्कदै गरेका एक नेपाली भारतको बहराइचबाट बेपत्ता भएका छन् । सल्यान बामेका ३३ वर्षीय बिरखे राना गएको चैत १४ गते देखि बेपत्ता भएको उहाँका भतिजा छविलाल रानाले जानकारी दिनुभयो ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा ताला
भवानी भट्ट/ उज्यालो । महेन्द्रनगर, २३ चैत – लामोसमयदेखि आन्दोलनरत नगर विकास समिति पीडित संघर्ष समितिले शुक्रबार महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा तालाबन्दी गरेको छ । चैत ७ गतेदेखि नगर विकास समितिको मुल गेटमा धर्ना दिदै आएको संघर्ष समितिले आज दिउँसो तालाबन्दी गरेको हो ।
मलेसिया घटनाः पक्राउ परेका ९ नेपाली कामदार रिहा
क्वाललम्पुर, चैत २३ – मलेसियामा पक्राउ परेका ९ जना नेपाली कामदार रिहा भएका छन् । केहीदिन अघि मलेसियामा नेपाली कामदार माथि भएको आक्रमणको छानविनका क्रममा परेका नौ जना नेपाली कामदार रिहा भएका हुन् ।
बोक्सी आरोपमा निर्मम यातना, कुटपिटपछि दिसा खुवाइयो
धनगढी, चैत २३ – धनगढी नगरपालिकासँग जोडिएको कैलालीको बेलादेबीपुर गाविसमा शुक्रबार विहान एक बृद्धालाई बोक्सी आरोपका निर्धात कुटपिट गर्दै दिसा खुवाईएको छ । बेलादेबीपुर गाविस ८ की ६५ वर्षिया राजकुमारी रानालाई उहाँकै सहोदर भतिजी नीरा राना र रानाका देवर रामसिंह रानाले निर्घात कुटपिट गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु
काठमाडौं, चैत २३ – प्रथम राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय धर्मसभा नेपाल र नेपाल पन्चांग निर्णायक समितिले गरेको दुई दिने सम्मेलनमा देशभरका ४ सय भन्दा बढी पन्डित, पुरोहित, ज्योतिषी लगायतको सहभागीता छ ।
बन्दले हुम्लामा उडान रोकियो
नेपालगन्ज, चैत २३ – आठ राजनीतिक दल सम्मिलित प्रगतिशील दलीय मोर्चाले गरेको बन्दका कारण हुम्लामा शुक्रवार हवाई सेवा ठप्प भएको छ । तारा एयरका पुर्वनिर्धारित दुईवटा उडान रोकिएको नेपालगञ्ज नागरिक उड्ययन कार्यालयका प्रमूख नरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पेस्तोल सहित २ जना पक्राउ
नेपालगञ्ज, चैत २३ – प्रहरीले बाँकेको खजुराबाट बिहान हतियार सहित दुईजनालाई पक्रेको छ । नलकटुवा पेस्तोल सहित भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा सवार दुईजनालाई पक्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
माओवादी गाउँ इन्चार्जले पत्रकारलाई मार्ने धम्की दिए
वुटवल, चैत २३ – एकीकृत नेकपा माओवादीका गाउँ स्तरका एक नेताले वुटवलका पत्रकार भोला बानियाँलाई मार्ने धम्की दिएका छन् । संघीय एक्सप्रेस अर्ध साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखको विषयमा करहिया गाउँ समिति इन्चार्ज अकवर अलीले मार्ने धम्की दिएका छन् ।
तह थप्ने सरकारी विद्यालय संकटमा
बिमल विष्ट/उज्यालो, डोटी, चैत २३ – स्थानीय निकायसंग बजेटको भर परेर तह थपेका डोटीका सरकारी विद्यालय फेरि तह घटाउने अवस्थामा पुगेका छन् । जिविस र गाविसले दिने बजेटको भरमा शिक्षक राखेर तह थपेका विद्यालय यस्तो बजेट नपाएपछि तह घटाउनुपर्ने अबस्थामा पुगेका हुन् ।
मनाङमा अबैध हतियार भेटिएन, लुकाएको आशंका
आश गुरुङ/उज्यालो, लमजुङ, चैत २३ – सरकारले अबैध हतियार बुझाउन दिएको समयसीमामा मनाङमा कसैले पनि हतियार बुझाएनन् । स्थानीय प्रशासनले गाविस सचिव र सीमा प्रहरी चौकीमार्फत गाउँगाउँमा सूचना पुर्‍याएपनि कसैले पनि हतियार नबुझाएका प्रहरी प्रमुख प्रवीणलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
भ्रष्ट्राचारको आरोपमा डाक्टरलाई पक्राउपूर्जी
रौतहट, चैत २३ – क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले भ्रष्टाचारको आरोपमा रौतहटको गौर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. अखिलेश सिंहविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । काज खटिएका बेला नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा अनियमित रुपमा कर्मचारी भर्ना गरेको र बजेट दुरुपयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको अख्तियार इकाइले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो ।
काठमाडौमा पण्डित सम्मेलन हुँदै
काठमाडौ, चैत २३ – काठमाडौमा शुक्रबार पहिलो राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलन शुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय धर्मसभा नेपाल र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको आयोजनामा हुन लागेको दुई दिने सम्मेलनको मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
नियम मिचेर किताब बेच्दै नीजि विद्यालय
काठमाडौ, चैत २३ – काठमाडौका केही नीजि विद्यालयले नियम मिचेर विद्यालय हाताभित्रै पुस्तक बेचेको पाइएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला केही नीजि विद्यालयले विद्यालय हाताभित्रै पाठ्यपुस्तकको विक्री गरेको पाइएको हो ।
ट्याक्टर पल्टिंदा ४ जनाको ज्यान गयो
रुकुम, चैत २३ – रुकुमको मग्मा गाविसमा बिहीबार राति भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा ४ जनाको ज्यान गएको छ । आठबिसकोटबाट झुला गाबिसको गाराघाट गइरहेको लु २ त ९९४७ टयाक्टर मग्गा १ को गोरेकाडाको मोडमा पल्टिँदा अरु ३ जना घाइते भएका छन् ।
डुङ्गा चढ्दा लाईफ ज्याकेट अनिवार्य
नवराज ढुङ्गाना/उज्यालो । पोखरा, चैत २२ - कास्कीका विभिन्न तालहरुमा डुङ्गामा यात्रा गर्दा अनिवार्य लाईफ ज्याकेटको व्यवस्था गरिएको छ । वेगनासतालमा वुधवार भएको डुङ्गा दुर्घटनापछि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले तालमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रुपमा लाईफ ज्याकेट लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमाओवादी कार्यकर्ताद्वारा रौतहट जिल्ला बन कार्यालयमा आगजनी
रौतहट, चैत २२ – एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले जिल्ला वन कार्यालय रौतहटमा तोडफोड गरी आगजनी गरेका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ११ राउन्ड हवाइ फायर गरेको छ ।
किर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गाविस सचिव बिरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं, चैत २२ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको बनौली गाविसका सचिव शत्रुधन मिश्र विरुद्ध किर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । गाविस सचिव मिश्रले १ सय २४ जनाको किर्ते औंठाछाप गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत २ लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
गाडी दुर्घटनामा १ को मृत्यु
बुटवल, चैत २२ - रुपन्देहीको सालझण्डी –४ फारलाइनमा भएको गाडी दुर्घटनामा परि एक जनाको ज्यान गएको छ । अन्य चार जना घाइते भएका छन् । कपिलवस्तुबाट बुटवलका लागि छुटेको लु १ ख ६२६५ नम्वरको ट्रकले त्यही दिशावाट आउँदै गरेका लु २ त ७८२४ नम्वरको र लु २ त ४५८ नम्वरको दुई ट्याक्टरलाई पछाडिबाट ठक्कर दिदाँ ट्याक्टरका सहयोगी कपिलवस्तु वाणगंगाका २५ वर्षिय बलराम चौधरीको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
भारतमा नेपाली परिवारद्वारा आत्मदाह, ३ को मृत्यु २ गम्भीर
काठमाडौं, चैत २२ - भारतको गुजरात राज्यको राजकोटमा बस्दै आएको एक नेपाली परिवारले गरिवीका कारण आत्मदाह गरेको छ । राजकोट नगर निगमको कार्यालय अगाडी वुधवार आत्मदाह गरेका ५ जना मध्ये ३ जनाको ज्यान गएको भारतीय अनलाइन हिन्दुस्थान टाइम्स डट कमले जनाएको छ । अरु २ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिम : कर्मचारीसँग मिलेर काम गरे विकासले गति लिन्छ
लमजुङ, चैत ६ – जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नङमासु भएर काम गरेमा विकासले गति लिने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
​माधुरी दीक्षितलाई मिल्यो श्रीदेवीको ‘शिद्दत’
अतिक्रमण रोक्न ‘कबुलियति वन’
नमूना विद्यालयमा नै छैन शौचालय
सुर्खेतमा कर्णाली प्रिमियर लिग टी ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता हुने
बिदाको दिनमा पनि सरकारी गाडी चढ्दै हुनुहुन्छ ? कारबाहीमा पर्नु होला
विश्वकप छनोटको सुपरसिक्स समिकरण रोमाञ्चक मोडमा
​सुध्रिएन कांग्रेस, गुट-उपगुटमै रमाउन थाले नेता
एयरपोर्टमा क्रिकेट समर्थकको नारा ‘टुँडिखेलमा खेलेर विश्वकपमा पुगिँदैन’ (भिडियो)
​ट्रयाक्टर दुर्घटनामा तीन जना घाइते